China pp yenyuka yokugcina yekati yomvelisi kunye Supplier | Sihai
Kk storges storages cage is made by pp can metal, the pp incence board is a wall and layer pad for the cage cage, according to the different cage size, the pp hollow sheet can customized made size different, the pp incence sheet also can fold, Ibhodi enamawele-udonga olugqibeleleyo ilungele ukukhusela iimveliso xa ushukuma kunye nengeniso. Kk incence yokugcina ikheji kunye nokusonga indlu yokugcina, ibhabhathane ebuhlanti, ikheyiji eqinileyo enobugcisa, ingeniso yokugcina indawo yokugcina izinto, ikheyi yesinyithi, njl njl, yindawo yokugcina izinto, isetyenziswa ikakhulu kugcino lwempahla enzima okanye enkulu kunye nomqheba ojikelezayo ngomatshini, ngakumbi ulungele ukusetyenziswa kwemizi-mveliso enjengeemoto, izixhobo zasekhaya, oomatshini, izixhobo zekhompyutha, eYurophu naseMelika naseJapan, eTaiwan nakweminye imimandla kuye kwasetyenziswa kakhulu.
Izixhobo eziphambili ze-cage ezigcinwe kumngxunya zisezantsi zecarbon iron iron kunye nepl. Xa ikheji eligciniweyo lingenanto, linokusongwa kwaye ligcinwe ukuze lisetyenziswe ngokupheleleyo kwisithuba. Okwangoku, ikheji eligciniweyo linokuxinana ngokupheleleyo, lisongeke kwaye lihanjiswe, kwaye liye landa njengesikhongozeli esibalulekileyo sokuhambisa izinto.
Kk Hollow ipleyiti yokugcina isakhiwo sebheji:
1. Iinkcukacha ezimanyanisiweyo, amandla aqingqiweyo, ukugcinwa okucacileyo, kulula ukugcina impahla.
2. I-forklift, ilifti kunye ne-crane zinokusetyenziselwa ukubekelela izingqimba ezine omnye komnye ukuze kugcinwe ukugcinwa kwezinto ezintathu.
3. Ukusebenza ngokulula, ukusetyenziswa okubanzi kunye nobomi benkonzo ende.
I-4, ukusetyenziswa kwentsimbi eyomeleleyo yentsimbi yokubamba iwelding, ezantsi kwe-U-channel yokuqinisa ukuqinisa, isakhiwo esiqinileyo.
5. Nge-forklift, i-trolley, i-hydraulic pallet ye-pallet kunye nezinye izixhobo, inokusetyenziselwa ukuhambisa, ukuphatha, ukulayisha kunye nokothula, ukugcinwa kunye nolunye ulungiselelo lwamalungiselelo.
6.p umngxuma isetyenziswa njenge nqanawa ukunqanda ukuvuza kwezinto ezincinci nokukhusela indawo yokulayisha.
Egqithileyo Iphepha elirinjiweyo nge-eva, epe foam
Okulandelayo: pp ibhokisi engenayo incence enesakhelo